शर्ट कपडा - आधारभूत प्रकार
वस्त्र लागि सबै भन्दा साधारण समाधान को एक शर्ट कपडा कार्य। लेख को एक किसिम सामाग्री दसौं वस्तुहरू बताए। यस लेखमा हामी सबै भन्दा लोकप्रिय केही विचार ऊतक को प्रकार -प्रकार प्रतिनिधित्व।
गर्मी शर्ट कपडा
न्यानो मौसम मा प्रयोग सामाग्री को सिलाई प्रकाश वस्त्र किसिम को लागि। शर्ट कपडा, तल प्रस्तुत छ विशेषताहरु जो, खुला हावा पारित गर्न विशेष क्षमता छ, त्यसैले तिनीहरू तातो गर्मी दिनमा लगाएका लागि, स्वच्छ सहज र सही विभिन्न कुराहरू sewed।
सबै भन्दा साधारण कपडे बीच गर्मी लुगा लागि बाहिर खडा:
कपास - सामाग्री प्राकृतिक छ कपास कपडा। क्रमिक उत्पादित बुनाई सनी पातलो, कमजोर संरचना छ जो फाइबर।
Calico - घर्षण प्रतिरोधी, स्वच्छ र सजिलो सामान। को कपडा उपस्थिति र बनावट मा chintz धेरै समान छ। आवश्यक फरक वृद्धि तन्यता बल र घर्षण प्रतिरोध कार्य।
साटन - कृत्रिम फाइबर को एक सानो रकम को वाहेक संग एक प्राकृतिक आधारमा अति टिकाउ सामाग्री। हामी व्यावहारिक आवेदन देखि अगाडि बढ्न भने, यस्तो कपडा छैन रेशम गर्न कमसल छ।
पर्दा - कपडा पारदर्शी संरचना र यथासक्य सजिलो अलग छ। कारण नमूना शर्ट कपडा को घनत्व धेरै सानो छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, यो अक्सर सुरुचिपूर्ण, हावा nightdresses सिलाई लागि प्रयोग गरिन्छ। भौतिक अक्सर स्त्री, कामुक फेसन बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
जाडो शर्ट कपडा
वर्ष को चिसो समय लुगा को उत्पादन लागू गर्ने मुख्य आवश्यकताहरु, उच्च गर्मी बचत खडा। यसबाहेक, शर्ट कपडा सिलाई जाडो लुगा लागि प्रयोग गरिन्छ कि, शरीर संग सम्पर्क मा पूर्ण सान्त्वना प्रदान गर्नुपर्छ।
चिसो मौसम मा शर्ट कपडा को विकल्प बरु सीमित छ:
बाइक - प्राकृतिक आधारमा एक व्यावहारिक कपडे। भौतिक fleecy सतह अलग छ। भने गुणस्तर लगाएका पूर्ण सान्त्वना र राम्रो इन्सुलेशन थर्मल सुनिश्चित गर्दछ।
Flannel - कपास, ऊन र ऊन मिश्रण कपडे प्रतिनिधित्व। सामाग्री को एक विशेषता सुविधा वेब दुवै पक्षलाई नरम ऊन को उपलब्धता छ। यो जाडो शर्ट कपडा मात्र होइन धेरै आकर्षक बनावट छ, तर पनि स्पर्श गर्न सुखद।
Flannelette - flannel एक विशिष्ट प्रकारको कार्य गर्दछ। को निर्णायक फरक एक ऊन लेखको एक छेउमा गठन जसमा टवील बुनाई फाइबर तरिका छ।
यस बन्द-सिजन मा कार्यका लागि डिजाइन लुगा को निर्माण, लागि, सामाग्री को औसत मोटाई प्रयोग र घनत्व। एक उच्च गुणस्तरीय कपडा पूर्ण फैलिएको र सबैभन्दा परिष्कृत वस्त्र शैलीहरू योगदान कि - यहाँ मुख्य रूप अक्सर चारखाना रूपमा कार्य जो एक पिंजरे, मा कपडा प्रयोग गरिन्छ।
Baptiste - अर्को पातलो पर्याप्त Demi ऊतक एक औसत घनत्व भिन्न भिन्न छ। सतह सामाग्री रेशमी, एक सुखद, खास चमक छ। को अपेक्षाकृत कम मोटाई बावजुद अंशुक एक पर्याप्त उच्च तन्यता बल छ। अक्सर सिलाई प्रकाश ब्लाउज, लागि प्रयोग वसन्त कपडे, छोराछोरीको लुगा।
यो पनि यस्तो poplin रूपमा, सेल यो Demi-सिजन शर्ट कपडा टिप्पण लायक छ। यो सामाग्री एक उच्च घनत्व छ कि एक कपास कपडा छ। को कपडा को बनावट नरम र pliable छ। तसर्थ, poplin को उत्पादन बेचैनी कारण छैन शरीर संग सम्पर्क हुँदा।
शर्ट कपडा यो योजना को कपडे बनाइएका समाप्त उत्पादन को उच्च स्वच्छ गुणस्तर निम्त्याउँछ जुन प्राकृतिक सामाग्री को वर्ग हौं। बल्क सामाग्री प्रतिनिधित्व श्रेणी पूर्ण breathable, लगाउने प्रतिरोध, छाला मा एलर्जी प्रतिक्रिया कारण छैन छ।
को शर्ट कपडा लागि जाँदा, भाग रूपमा जो छन् कृत्रिम फाइबर, त्यसपछि यस्तो चित्रहरु लगभग कुनै शिकन वा कम। यो सबै यस्ता सामाग्री को लुगा धुने र हेरविचार को सादगी योगदान पुग्छ।
बच्चाको वृद्धि कसरी मापन गर्ने? के छरितो हुन सक्छ! हरेक घर मा भित्तामा बच्चाहरु को लागि Stadiometer!
Plasterboard "Magma": निर्माता, समीक्षा, फोटो
कल्पना लागि गाजर kotlety- कोठा।
शिक्षा के हो र समाजमा यसको भूमिका
जो Bastille लिए? र किन?
जापानी प्यानकेकहरू: नुस्खा
के वसन्त मा स्याउ रूखहरू लागि मल बनाउने?
पोर्टफोलियो - उपलब्धिहरू सञ्चालन कार्ड